Iingubo ezinkulu zekwindla kunye nobusika Amaphepha ombala wamahhala okukhuphela
Iilenze zasebusika ezenziweyo ezinobumba bephepha lodonga
Izibane zomoya ezivela kwiNkulungwane neeNye eziNye
Izibane ezenziwe ekhaya babe nekratshi ekhethekileyo. Ehlotyeni baqhayisa kwiindawo ezinomlambo ofudumeleyo, ekwindla nasebusika bahlobisa indlu yethu okanye itafile yokutya, nangona kungekho moya.
Iintshukumo ekwindla njengomhlobiso
Ewe, yabona izibane ezenziwe ekhaya ekwindla nasebusika njengomhlobiso ngaphandle komnyango, umzekelo, emnyango, omkhulu. Inxalenye ephambili kukuba kulula, enye Ukuyila i-windlight ngokwakhoukwenzela ukuba nabantwana banokuyonwabela kwaye bafezekise umphumo omangalisayo ngaphandle kolwazi olungaphambili. Ukuba oko akusikhuthazo ...
U-Windlichter umane uzichukumise
Izibane ezenziweyo ekhaya ukuwa
Ngenye ukukhanya komoya ekwindla ekwenzeni ikhaya Xa unesiglasi esifanelekileyo. Ukuba kukho ilanga elikhulu, ungasebenzisa ukugcina izimbiza. Ngokuqinisekileyo, ziyafumaneka kwiindawo ezahlukeneyo. Nokuba intsimbi yokudibanisa inokusebenza kakuhle.
Ihlala ibukeka ilungile ukuba awuyiyo enye ilanga elenziwe ngekhaya esetyenziselwa ukuhlobisa, kodwa ubuncinane ubuncinane bohlobo olufanayo etafileni okanye kwi window window.
Njengoko amakhandlela ayenayo i-tealights okanye - ngokuxhomekeke kubukhulu beglasi-nokuba yincinci elincinci.
Kwiglasi ekwindla udinga amaqabunga ambala e-maple & co. Ezi zimele zomiswe iintsuku ezimbalwa ngaphambili. Emva koko ungazibopha ngentambo elula yokuhlobisa iiglasi. Kodwa qaphela: Nceda uqiniseke ukuba amaqabunga aomileyo akakwazi ukudibana nomlilo webhandlela.
Ngaloo ndlela unako ukuqhubela phambili nakwezinye iinyanga kwiglasi. Iimbalwa zekhadibhodi ezicetywayo ebusika, amaqabunga omisiwe kunye nemifuno entwasahlobo nasehlobo. Into enhle kukuba loo nto ilanga elenziwe ngekhaya phantse iindleko zemali!
Ngokuqinisekileyo ufuna kwakhona ikhandlela neglasi ngenxa yoko. Ngaphezu koko, ufuna kwakhona iphepha lokunamathisela iphepha kunye nokulandelela iphepha. Nandi kwi-tapetenkleistermethode jonga igalazi encinane, oye wachaza ngamaqela amancinci, umzekelo, kwi-tray yeKrisimesi.
Ukususela kwiphepha lokulandelela tealight Iimbobo zasebusika ezifana neentyantyambo ezinqabileyo, iinkwenkwezi okanye imithi yemifire. Ezi zinto zithathwa ngokwahlukileyo okanye ziqhekeke (ezintle, ukuba unqamle kuphela iinkwenkwezi okanye nje ngamaqabunga, umzekelo) kunye nekhasi lodonga kwiglasi.
Kwabancinci abantwana banokuqhekeza amaqhekeza okanye iziqwenga kwiphepha. Mhlawumbi usethe umbala ohambisana neKrisimesi. Kwaye ukuba i-colorful, yinto nje yokukhanya kwelanga yonke!
Ukuba awufuni ukwenza ilanga lakho ngaphandle kweglasi, unokusebenza kunye nephepha lesikhumba. Nangona kunjalo, oko kunzima kakhulu kubantwana abancinci kakhulu. Apha ufuna umtya webhiya, amaphepha emaphepha embala, iphepha lepaki kunye namatye aqhakazileyo. Kwakhona, ke, isicwe, i-glue kunye ne-tealights.
Ukubhaka kwiipilisi eziphekiweyo ze-autumn kunye nee-muffins zamathambo
Ukwindla kwiphepha lekhasi
Ukubala imibala ekwindla konyaka
Izinja ebusika | izilwanyana
Uhlobo lokubumba ubusika
Ukubala imibala ebusika yebhola lebhola lebhola
Uhlobo lwemibala Iinyoni kwiindlu zasebusika zasebusika
Ukubala imibala ebusika bonyaka